Personalities & Profil: Eran Stern | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Eran Stern ao amin'ny studio. (loharano: Natasha Newrock-Stern)
Broadcast Broadcast's “Kat Show New York Profiles ”dia andiana dinidinika miaraka amin'ireo matihanina malaza amin'ny sehatry ny famokarana izay handray anjara amin'izany Kat Show New York (Oct. 16-17, 2019).
Eran Stern, teratany israeliana, izay nahafaly ahy vao haingana tamin'ny dinidinika, dia mpampianatra, mpandaha-teny, mpitendry mozika ary manampahaizana amin'ny famolavolana hetsika ary filmmaking Lahatsoratra-famokarana. Saingy, eto, avelako i Stern hampahafantatra ny tenany amin'ny teniny manokana. “Mpamorona fihetsiketsehana manana traikefa mihoatra ny 25 taona aho. Tao anatin'ny folo taona lasa, nifantoka tamin'ny fampianarana sy mpanoratra fanabeazana aho. Ny fandrisihana ahy amin'ny fiainana dia ny zavakanto sy ny mozika. Tiako koa ny mijery olona ao anaty lamasinina. ”
Ny fahalianan'i Stern tamin'ny mozika sy ny zavakanto dia nanomboka tamin'ny fahazazany. "Ny tantaram-pitiavako tamin'ny mozika dia nanomboka fony aho 12 tao amin'ny tampon'ny vanim-potoana Maxi-Singles 80s," hoy ny fanazavany. “Ny rakotra firaketana dia nanjary varavarankely ho an'ny zavakanto maoderina, indrindra ireo marika indie toa ny rakitsary Mute sy ZTT. Tadidiko fa nividy rakikira fotsiny aho satria raiki-pitia tamin'ny rakotra firaketako. Ambony rihana ao amin'ny Eric's [sary eto ambany] dia ohatra iray lehibe.
The Ambony rihana ao amin'ny Eric's rakotra rakitsary.
“Ny fitiavako boky sy sarimihetsika dia avy amin'ny fanaovana sary. Izaho dia nandoko sy nanao sary hatramin'ny mbola kely - 5 taona — ary nanao sary an-tsary an-taonina maro izay notsindrian'ny magazine Marvel sy DC Comics ary koa tantara mahatsiravina nataon'i Stephen King. Rehefa namboarina tamin'ny sarimihetsika ireo tantara ireo dia nijery azy ireo andro aman'alina aho. Mba hampiroboroboana ny fiankinan-doha amiko, nitodika tany amin'ny literatiora aho, ary izany dia namorona tsingerina tsy miato izay maharitra mandraka ankehitriny.
Raha jerena ny tombotsoany amin'ny zavakanto, dia mahagaga ny mahafantatra fa tsy niavaka tamin'ny zava-kanto i Stern tamin'ny fianarany akademika. “Nianatra momba ny Business Management aloha aho satria nieritreritra fa tsy maintsy mahazo fanabeazana matotra izay hanampy ahy amin'ny tena 'fiainana', ka manana BA ao amin'io departemanta io aho. Saingy tsapako fa nanao zavatra izay tsy tiako aho ary tsy dia niraharaha ahy loatra, ka rehefa afaka 10 taona niasa ho mpitantana varotra Autodesk, Nanapa-kevitra ny handinika indray ny fiainako aho ary nanapa-kevitra ny hanaraka ny foko sy mianatra ny famolavolana. Amin'ny maha-olona ampianarinao ahy, nanomboka irery aho, ary taona vitsivitsy taorian'izay dia niditra tao Shenkar ary nahavita mari-pahaizana famolavolana sary. Avy eo dia nijanona tao nandritra ny 12 taona aho nampianatra sy nitantana ny departemantan'ny Motion Graphics. ”
Raha jerena ny fomba fihodinan'i Stern nanakaiky ny asany ara-javakanto, izany dia mahaliana azy izay mahaliana azy filmmaking koa avy amin'ny loharano tsy azo inoana. “Tao anatin'ny fanompoana nataoko tao amin'ny tafika tao Israel, adidiko ny namorona horonantsary fanofanana izay manazava ny fampiasana fitaovana enti-miasa ao anaty tanky. Hatramin'ny nahatongavako avy amin'ny loko sy sary, nampiasa ny Macromedia Director aho - izany dia tamin'ny 1991 - ary namorona sarimihetsika fohy mihetsika. Fanamby lehibe ny fanontana azy io hiverina amin'ny horonan-tsary ary farany naka sary ny efijery momba ny solosaina izahay. Saingy mendrika izany ezaka izany. Nahazo ny laharako aho ary nahatsapa koa fa nahita ny faritra misy ahy. Manantena aho fa hihatsara kokoa amin'izany rehefa mandeha ny fotoana. ”
Farany, nanapa-kevitra hanomboka ny orinasany i Stern, SternFX. “Antony roa lehibe no nanombohan'ny orinasa. Voalohany, manamaivana ny fikajiana ahy amin'ny maha mpampianatra ahy. Tonga saina aho teo am-piandohana fa raha manohy amin'ity taham-pahaizana ity aho, dia hihena vetivety ny heriko, ary nitady fomba hitehirizana ireo fampianarana nampianariko aho, izay nitondra ahy tamin'ny fahitana voalohany fa tokony hanoratra ny tenako ho mampianatra, ary amin'izany hitahiry ny angovo ary ataovy azon'ny olona betsaka araka izay azo atao. Ny antony faharoa dia somary manokana kokoa; Tsy maintsy nahazo vola fanampiny aho. Voan'ny homamiadana ny vadiko ary tsy afaka miasa intsony. Izaho irery no niantoka ny andraikitra ara-bola, ary tsy maintsy nitady fomba hitondrana karama hafa aho, tamin'izaho mbola tao, nefa tsy niala tao an-trano. ”
Ny dingana manaraka amin'ny fivoaran'ny matihanina an'i Stern dia ny fivarotana ny tenany ho mpanazatra sy mpanolo-tsaina momba ny fijerin'ny maso. “Nampihatra ny fitsipiky ny 'fahazoana tongotra eo am-baravarana' aho, midika izany fa nanolotra ny entako ho an'ny olon-drehetra fantatro aho, ary niaraka tamin'ny chutzpah israeliana kely dia nanohy nihombo aho mandra-pahazoako jiro maitso. Raha vantany vao nisy olona nanome ahy fotoana dia nanao izay azoko natao aho mba hitazomana ny hery ary hametrahana ny toerako. Raha fintinina, tsy misy fomba fahandro majika eto - fitambaran'ny faharetana, fifandraisana vitsivitsy ary, toy ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainana, fotoana sy vintana tsara. Anisan'ireo mpanjifako, azoko atao ny miantso ireo ekipa sary iraisam-pirenena avy any Disney, Weizmann Institute, ary Adobe, ary koa masoivohom-baovao an-toerana, mpampita vaovao ary trano paositra. ”
Ny fandraisan'anjaran'i Stern amin'ny taona 2019 Kat Show New York dia atrikasa roa, "Focus On: Typography & Title Design" ary "Compositing with After Effects and Cinema 4D," izay samy haseho ho ampahany amin'ny Post / Production Conference. “Ny voalohany tamin'ny Kat Show 22 taona lasa izay dia mpanatrika. Avy eo, tao amin'ny 2005, dia nampianariko ny fivoriana voalohany tamin'ny fihaonambe Post / Production World. Ho tadidiko foana i Ben Kozuch, filoham-pirenena ary mpanorina ny Fomba fifandraisana amin'ny hoavy, izay nanome ahy ny fotoana voalohany azoko. Hatramin'izay, tafiditra ao anatin'ny ekipa namokatra ny hetsika aho, ary manohy miresaka amin'ny NAB sy ny federasiona hafa. Kat Show dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hanamboarana fifandraisana vaovao sy hanamafisana ireo tamba-jotra misy, ary mbola mino aho fa izany no fampisehoana lehibe indrindra amin'ny taona.
“Matetika ny soratra no singa manandanja indrindra amin'ny tetikasan-dahatsary, saingy maro no manamaivana ny fahasarotan'ny fahazoana taratasy. Amin'ny fotoam-pivoriana voalohany, hifantoka amin'ny Typography sy ny famolavolana lohateny aho, ary haneho teknika isan-karazany amin'ny fiasa amin'ny karazana After Effects. Ho asehoko koa ny fomba fampifangaroana ny lahatsoratra sy ny horonantsary ao amin'ny After Effects hamoronana seho manaitra. Ny lahatsoratra 3D dia zavatra lehibe ihany koa, noho izany dia hamoaka hazavana, endritsoratra ary hamelona lahatsoratra izahay, ary atambatra amin'ny effets 3D hafa. Hanokana fotoana amin'ny ligature, indents, kerning, glyphs koa aho. Ity session roa ity dia natokana ho an'izay te hanao karazana azo vakina sy tsara tarehy ary hamelona azy ao amin'ny After Effects.
“Ho an'ny fotoam-pananganana, hampisehoako ny fomba hanatsarana ny renders mivoaka amin'ny Sinema 4D miaraka amin'ny fanampiana kely avy amin'ny After Effects. Ohatra, azonao atao ny mitoka-monina singa, miasa miaraka amina pass pass isan-karazany, mampiasa ny rafitra Take, ary na ny fakantsary sy jiro fanondranana aza. Izany dia afaka manampy amin'ny fametahana ny valiny eo amin'ny sehatry ny paositra, fa tsy mila mandefa indray isaky ny te-hanova ianao. Misy ihany koa ny vokany azo ampiharina amin'ny dingana avo lenta kokoa. Amin'ity fivoriana ity dia hianatra teknika isan-karazany hanatsarana sy hanafainganana ny famoronana anao ianao. Misaotra ny fidirana henjana eo amin'ny After Effects sy C4D. Ity fivoriana ity dia natao ho an'izay te-hanampy zavatra 3D amin'ny horonan-tsary ary hampiditra azy amin'ny paositra. ”
Mikasika ny hetahetan'i Stern amin'ny ho avy dia nilaza tamiko izy fa ny laharam-pahamehany dia ireto manaraka ireto. “Mamorona lohateny an-tserasera misimisy kokoa amin'ny fiteny anglisy sy hebreo. Mampianatra amin'ny kaonferansa ary ampio ireo olona manao ny dingana voalohany amin'ny sary mihetsika sy ny famolavolana. Meteza ho raim-pianakaviana sy lehilahy mahay. Tohizo ny fihazakazahana sy fihainoana mozika ary, ny tena zava-dehibe, salama, mitsikia ary tohizo ny lisitry ny lisitry ny filalaovana ao amin'ny Netflix. ”
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News 2019 Kat Show Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Eran Stern Fomba fifandraisana amin'ny hoavy Kat Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers NAB16 nabshow Shenkar SternFX 2019-10-09
Previous: Zavatra tsy mitovy amin'ny resahana tsotra (sy ny zava-misy hoe "Tokony ho fahafinaretana izany") ao amin'ny NAB New York
Next: NAB Show New York: TO-A hanasongadinana farany amin'ny famokarana mivantana